Global Voices teny Malagasy » Ejypta: Bilaogera nanjavona taorian’ny famotsorana azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Janoary 2019 3:33 GMT 1	 · Mpanoratra Noha Atef Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Na dia navotsotry ny Mpampanoa lalàna aza ilay bilaogera Ejypsiana Abdel Rahman Fares (25 taona), dia mbola tsy fantatra izay misy azy. Nosamborina tamin'ny 5 Aprily i Fares izay mibilaogy ao amin'ny Lesani Howa Qalami  (Ny lelako no peniko), raha nizara taratasy kely tao an-tanànany ao Fayoum, miantso ny vahoaka mba hidina an-dalambe ary hanohitra ny governemanta, izay tafiditra ao anatin'ny “fitokonana 6 Aprily ”.
Voampanga ho nizara taratasy kely mampiroborobo ny foto-kevitry ny Mpirahalahy Miozolomana  sy miantso fitokonana ity tanora bilaogera ity. Ankoatra izany, fantatra fa bilaogeran'ny mpirahalahy miozolomana izy, izay midika fa mpikambana ao amin'ny vondrona voaràran'ny lalàna izy. Nanoratra tao amin'ny bilaoginy ny naman'i Fares fa navotsotra izy ny alina lasa teo, ary tsy misy mahafantatra izay toerana misy azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/22/133982/
 fitokonana 6 Aprily: https://globalvoicesonline.org/2009/04/07/egypt-april-6-a-day-of-anger/